Rooney ayaa casaan u ah, seddexleey uu ka dhaliyay Rossi halka LAFC uu garaacay DC - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Rooney ayaa casaan ka qaatay, seddexleey uu dhaliyay Rossi, halka LAFC uu garaacay DC
Rooney ayaa casaan ka qaatay, seddexleey uu ka dhaliyay Rossi halka LAFC uu garaacay DC
Carlos Vela ku daray goolashiisa guud ee MLS iyo Diego Rossi seddexleyda hat-ka, halka Los Angeles FC ay muujineyso in tani ay tahay horyaalka heerka koowaad ee xilli ciyaareedka. Xilliga Sabtida ee Sabtida oo ku beegan DC United
Guushaan ayaa ka tagay LAFC kulmin 5-0-1 halka xiran guud ahaan barta uu ku MLS 16. DC United (3-1-1, 10 dhibcood) galay labadoodaba waxa ay kaalinta koowaad ee Eastern Conference in yar ka badan muddo bil ah ka dib markii uu bilowgii xilli ciyaareedkan.
Diidmada 3-0, DC United ayaa lumisay rajo ah inay dib ugu laabato Wayne Rooney wuxuu ahaa mid hore. ka dib markii uu casaan qaatay kulankii daqiiqadii 33aad ee Rosson Rooney ayaa markii hore helay jaalihiisii ​​jaale ka hor inta uusan cadeeynin ficil ahaan lagu ogaaday inuu qalad kugula noqday inuu tuuro.
Waxay ahayd card shanaad casaan toos ah ee Rooney ka fariistay sanadkii 17. Waxa uu eryey mar 17 2002 sano la Everton, mar la Manchester United ee 2014 iyo laba jeer la England - ugu horeysay ee koobka aduunka ka dibna 2006 2011 mar. Waxaa sidoo kale laga eryey laba jeer United ka dib markii labo ka mid ah kaararka jaalaha ah.
Run ahaantii qaabka weerarka, LAFC ayaa hogaanka u qabatay 1-0 daqiiqaddii 15e markii Adama Diomande ayaa dib u soo kabsaday United oo ku soo laabatay khadka dhexe, waxaana la siiyay Vela Freefall. dhexda berriga. Vela ayaa ku dhegay lugta bidix waxaana uu shabaqa ku hubsaday goolhayaha hortiisa Bill Hamid .
Goolkaasi wuxuu ahaa todobaadkii xilli ciyaareedkan ee Vela lix kulan.
Diego Rossi ayaa seddex gool ka dhaliyay DCF tartan xoogan oo ay la galeen kooxda United. Geoff Burke-USA TODAY Sports
Rossi ayaa dhaliyay markii seddexaad ee seddex kulan by diiwaan score ah 2-0 in daqiiqadii 27ème daqiiqadda ka dib markii 27e mas'uul ka Vela inta lagu guda jiro bixitaanka a tartanka oo ku wareejiyey tallaalka xarunta of Hamid -town.
Waxay Rossi mar kale ku jirtay daqiiqad 32th ka dib markii la quudiyo Mark-Anthony Kaye goolkiisii ​​seddexaad wuxuu ku jiraa daqiiqad 76th ka dib markii uu ka soo wareegay Christian Ramirez halka uu ku ciyaari karo dhanka bidix ee daafaca bidix. Sadexdiisii ​​ciyaar ee ciyaarta iyo lixaadkii xilli ciyaareedka ayaa laga saaray midigta midig ee Hamid.
DC Kulankii ugu fiicnaa ee Man United goolal ah wuxuu ahaa daqiiqad 56e markii goolhayaha LAFC Tyler Miller ayaa ka maqnaa booska tallaalka Russell Canouse laakiin daafaca Steven Beitashour sii daayay goolka
Miller wuxuu sameystay saddex badbaadin xiritaankii labaad ee xilli ciyaareedka iyo 12e laba sano oo lala yeeshay LAFC.
LAFC ayaa uqalantay guushii ay ka gaartay inkastoo aysan ciyaarin Diomande daqiiqad 28e ka dib markii lagu bedelay Diomande. Ramirez ka dib dhaawacyo labada lugood.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/dc-united/story/3818679/rossis-hat-trick-helps-lafc-dominate-dc-united-as-rooney-sees-red
Messi iyo Suarez ayaa hogaaminaya Barca horiyaalka Atletico (ciyaartoyda 10) si ay u xoojiyaan hogaanka
Balotelli ayaa doonaya Bonucci, Zidane ayaa lumiyay ciyaartiisii ​​ugu horeysay - La Quotidienne # 447 - VIDEO